“Voaozona Hohadihadiana ny Uber ao Shina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2015 6:34 GMT
Sary mampiseho ny fifanandrinana teny an-dalambe teo amin'ireo saoferan'ny Uber sy ny polisy misahana ny fifamoivozana tamin'ny 10 Mey tao Chengdu. Sary nalain'ilay mpisera Weibo, Wong Pok.
Nahatonga ny vahoaka hitsikera ny manampahefana Shinoa ao an-toerana indray ny bemidina farany tamin'ny 6 mey tao amin'ireo birao Taxi malaza Uber tantanin'ny Amerikana, tao an-tanàna atsimo-andrefan'i Chengdu. Niampanga ireo manampahefana ho mampiseho tombotsoa manokana amin'ny indostrian'ny taxi sy tsy miraharaha ny tolotra ratsy avy amin'izany indostria izany ny sasany, ny hafa kosa talanjona mahita ireo manampahefana manasazy indray ny orinasan'ny aterineto vahiny hafa.
Tanàna Shinoa teo amin'ny 10 teo no nametrahana ny Über. Nanomboka tao Guangzhou ny fangejana ireo biraony, ka nakan'ny manam-pahefana avy ao amin'ny sampan-draharahan'ny fitaterana an-tanàna, ny polisy sy ny sampan-draharaha mpanome fahazoan-dalana ara-pandraharahana ireo finday sy fitaovana hafa, ary avy eo izy ireo niparitaka tany amin'ireo tanàndehibe hefa.
Nilaza ny manampahefana ao amin'ny vaomieran'ny fifamoivozana ao an-tanànan'i Chengdu fa ny bemidina natao dia ao anatin'ny famotorana lalina amin'ny andraikitry ny Uber eo amin'ny sehatr'asan'ny taxi tsy miankina tsy manana fahazoan-dalana. Nandràra ireo fiara tsy miankina tsy hanao raharahan'ny taxi amin'ny alalan'ny fampiharana finday ny governemanta Shinoa tamin'ny volana Janoary.
Ankoatra ny bemidina tany amin'ireo birao, nikendry ireo saoferan'ny Uber ny polisy misahana ny fifamoivoizana. Wong Pok, mpanolo-tsaina ara-piofanana namariparitra tao amin'ny Weibo (mitovy amin'ny Twitter) ny fifandonana hitan'ny masony tamin'ny 10 Mey tao Chengdu :
Aza mitomany ry Uber ao Chengdu: Androany hariva tao akaikin'i Nuishikuo sy Haijiaoshi ao Chengdu, nalain'ny polisy misahana ny fifamoivoizana ny taratasy fahazoan-dàlana hamily fiara (Über) sy ny finday. Maro tamin'ireo saoferan'ny Über no tonga tao an-toerana mba hanohitra ny “bemidina fanjonoana” [polisy manampahefana manao fitafiana sivily mody manao mpanjifa mba hamitahana ireo saofera ao amin'ny aterineto]. Nitranga izany rehefa vita ny fampisehoan'i Chang Hui Mei ary tsy nahita taxi intsony ireo mpankafy an'i Chang. Nisy ireo mpamily fiarakaretsaka sasany nitaky RMB100 [tokotokony ho 16 dolara] ho vola miditra voalohany tsy misy rosia. Amin'ny tontolo toy izany, fampisehoana tanjaka ny tohiny. Amin'ny herinandro ambony, hanatevin-daharana ny Uber amin'ny maha-mpamily ahy aho. Dia izay.
Vetivety dia voafafa ny lahatsoratra, saingy efa taorian'izy nahazo fanehoan-kevitra tokony ho 1.000 ary efa nisy an-jatony nampita azy.
Na dia iray tamin'ireo voalohany nifampizarana toerana anaty fiara aza ny Uber dia tratra aoriana miohatra amin'ireo Shinoa mpaka tahaka izay niroborobohaingana sy nahazo fanohanana avy amin'ireo mpampiasa vola goavana.
Na izany aza, tsy midika izany fa tsy nitaraina mikasika ny famoretana ireo mpiserasera habaka. Nilaza ireo mpaneho hevitra maromaro fa tokony handrisika ny fanaovana zava-baovao, manamora ny fitaterana sy manatsara ny faharatsian'ny tolotra eo amin'ny orinasan'ny fiarakaretsaka ny andraikitry ny governemanta, kanefa toa manakana ny zava-baovao mba hiarovana ny tombontsoan'ny fandraharahana sasany indray ireo manampahefana.
Tsy faly momba ny zava-misy eo amin'ny orinasan'ny fiarakaretsaka i MRJERRYZHOU, manam-pahaizan'ny fiara
Tokony hamoaka fitsipika vaovao ny governemanta mba hanamarinana ny indostrian'ny fiarakaretsaka, fa tsy mamela ireo manampahefana sasany hampihatra lalàna diso. Ny ilain'ny vahoaka dia tolotra tsara sy sahaza eo amin'ny taxi. Isika vahoaka dia hanohana ny Über ihany raha mbola atao ampihimamba ny raharahan'ny taxi, izay matetika manome fiara maloto sy tolotra mahatsiravina ary matetika mandà na manararaotra ireo mpanjifa ny mpamily.
Nihevitra i Zhu Hai fa niasa ho amin'ny tombontsoan'ny orinasan’ny fiarakaretsaka ny manampahefana ao an-toerana :
1. Nohadihadiana ny Uber satria manohintohina ny tombontsoan'ny manampahefana ao amin'ny indostrian'ny taxi;
2. Ny fanamparam-pahefana no fomba mahomby indrindra ataon'ny manampahefana eo an-toerana mba hahazoana izay tiany;
3. Te-hiady amin'ny fanovana ny fahefan'ny taxi nentim-paharazana raha mandrava ny ampihimamba ireo fiara manokana.
Ny sasany kosa nanontany raha anisan'ny fikasan'ny governemanta hametra bebe kokoa ny fidirana amin'ny aterineto ao amin'ny firenena na koa hananganana “intranet” (aterineto anatin'ny fanjakana) ny fangejana, ka ny Uber amin'ny maha- orinasan'ny aterineto vahiny azy no lasibatra voalohany. Nizara ny heviny ny mpisera Weibo iray, Atoa Tuixiang Moda :
Nitsidika ny biraon'ny Uber ao Chengdu ny polisy Shinoa taorian'ny bemidina tao Guangzhou. Maro ny olona milaza izany ho tombotsoan'ireo mpandrindra ny fitaterana ao an-toerana, ny hafa kosa mandray izany ho hetsika avy amin'ny mpifaninana amin'ny Über ao Shina. Na izany aza, amin'ny fomba fijery mivelatra kokoa, mety niainga avy amin'ny paikady ara-aterineto fanaon'i Beijing izany izay manao izay hampitsontsorika ny fiharian-karenan'orinasan'aterineto vahiny sy manohana ireo vahaolana hafa avy ao an-toerana. Mety hitarika mankany amin'ny tambajotra anatin'ny fanjakana izany rehetra izany. Ka voaozona hohadihadiana ao Shina ny Uber!
Azo antoka fa tsy vao voalohany no nisy orinasa an'aterineto vahiny niatrika fanenjehana. Taloha ny governemanta Shinoa efa nampiato ny fidirana amin'ny Google, Facebook, Twitter, ary ankehitriny Über indray.